China 16 Chikumi 2022
Kupakirwa Kwejusi Hwaro hwepfungwa yeYega Yakachena chinhu chemanzwiro. Iyo yekuvandudza mazita uye yekugadzira dhizaini inotarisana nemanzwiro emutengi uye manzwiro avo, ivo vanobatsira chinangwa chekumisa munhu iyeye padyo pasherufu inodiwa nekuvaita kuti vatore kubva kuhuzhinji hwezvimwe zvigadzirwa. Pakeji yacho inoratidza mhedzisiro yemichero inobuda, iwo maratidziro emakara akadhindwa zvakananga pahombodo yegirazi yakafanana nemhando yemichero. Inotarisa inosimbisa iwo mufananidzo wezvinhu zvakagadzirwa.
Chipiri 14 Chikumi 2022
Art Kuisirwa Zvishoma nezvishoma Zvinhu zvinoongorora nyika yekutsvaga nezvekurapa uye nemifananidzo yakaoma inoonekwa pasi pesikorosikopu, kududzira zvekare izvi muzvimiro zvemazuva ano zvisinganzwisisike kuburikidza nekuputika kwependi yakajeka yefuru yependi. Pamusoro pe250 metres kureba, neanopfuura makumi mana emhizha mabasa ndiko kuiswa kwakakura kunoisa iko kunopa runako rwekutsvagisa kune ziso revanhu.
Muvhuro 13 Chikumi 2022
Kuisirwa Yakafuridzirwa neruvara rutsvuku, iyo inomiririra rombo rakanaka muChinese Tsika, Iyo Reflection Kamuri chiitiko chakasikwa chakagadzirwa zvachose kunze kwemagirazi matsvuku kuti agadzire nzvimbo isina mugumo. Mukati, typography inoita basa rekubatanidza vateereri kune yega yega tsika dzeChinese Nyowani uye inokurudzira vanhu kuti vafungisise nezve gore rave riri uye gore rinotevera.
Svondo 12 Chikumi 2022
Activation Yechiitiko Imba inombundira chishuvo cheemba yemunhu uye isanganiswa yekare neitsva. Vintage 1960 pendi inofukidza kumadziro kumashure, zvidiki zvemunhu memento zvakapararira mukati mekuratidzira. Pamwe chete zvinhu izvi zvakadzvanywa muhukuru hwetambo dzichigadzira pamwe chete senge nyaya imwe, iko kumirira panomira muvheneki kunozivisa meseji.
Art Yekuisa Iyo Remangwana Anoona Iwe unopa runako rwetarisiro inotambirwa neyechidiki yekugadzira yekugadzira - vafambi venguva yemberi, vanogadzira, vanogadzira uye maartist enyika yako. Iyo ine simba rekuona nyaya, inofungidzirwa kuburikidza nemahwindo makumi matatu pamusoro pemazinga mashanu maziso anopenya kuburikidza neakajeka eruvara rwemavara, uye pane dzimwe nguva vanoita sevanotevera chaunga pavanotarira kunze vaine chivimbo mukati mehusiku. Kuburikidza nemeso aya anoona ramangwana, iye anofunga, mutsva, musiki uye mugadziri: mangwana ndivo vagadziri vanozoshandura nyika.
Wood Storm Desktop Yekuisa Imo Chipiri 28 Chikumi
Smartstreets-Cyclepark™ Shanduko Yebhasikoro Yokupaka Muvhuro 27 Chikumi
Insect Sculptures Kushambadzira Svondo 26 Chikumi
Kupakirwa Kwejusi Tafura Yekofi Art Kuisirwa Kuisirwa Activation Yechiitiko Art Yekuisa